Ratlọ ọrụ Miratorg amalitela ọrụ maka ịhazi akwụkwọ nri na poteto na mpaghara Tula - magazin "Potato System"
Foto sitere na saịtị invest-tula.com
Ọnụ ego nke itinye ego na ihe owuwu karịrị 8,2 ijeri rubles.
Companylọ ọrụ Miratorg kwupụtara mwepụta nke ụlọ ọrụ maka mmepụta, nchekwa na nhazi nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na poteto na mpaghara Plavsky nke mpaghara Tula. Ka anyi cheta na nkwekorita na nkwekorita na mmejuputa oru ngo a n'etiti ochichi nke mpaghara Tula na oru ugbo na-ejide Miratorg ka edebara aka na All-Russian Investment Forum na Sochi na 2019.
Thenye ọrụ nke ụlọ ọrụ ọhụrụ nwere ikike nke 100 tọn nchekwa ga-eme ka ọkọnọ nke akwụkwọ nri agbakọtara n'otu n'otu maka ịre ahịa, yana yana ịgbakwunye usoro a na-emepụta ngwa ngwa: akwụkwọ nri ndị toro eto na-ekpuchi mkpa nke njide nke ihe ndị mejupụtara maka ngwakọta nri mkpụrụ oyi, ngwaahịa ndị emechara emecha na nri nri. a-n'efu n'efu usoro na-enye gị ohere hazie ruo 000% nke akụrụngwa n'ime ndepụta mmiri na nri.
Njide ahụ na-emejuputa atumatu oru na mpaghara Plavsky, Chernsky na Shchekinsky nke mpaghara Tula. A na-akọ ugbo karọt, eyịm, beets, galik na poteto n’okpuru mmiri n’ógbè karịrị hekta 3.
A na-echekwa akwụkwọ nri n'ime ụlọ iri asatọ na ụlọ isii. Nke a bụ nnukwu ihe nchekwa akwụkwọ nri na teknụzụ kachasị elu na Russia.
A na-arụpụta ngwaahịa na ahịrị nke ịsa, mbukota, nhicha, blanching na kefriza na mpaghara karịa 18, 4 puku m2. Arụpụta nke ahịhịa ịsacha bụ ihe karịrị 602 puku kilogram nke akụrụngwa kwa ụbọchị, ahịhịa nkwakọ ngwaahịa - 231 puku kilogram nke akụrụngwa kwa ụbọchị, usoro nhazi - 99,5 puku n'arọ kwa ụbọchị, ahịhịa nduku - 3 kg / hour, na oyi - Kilogram 000 kwa ụbọchị.
Ngwurugwu ahụ gụnyere ihe karịrị ihe 180: a na-asacha, bee na akwụkwọ nri na-acha ọcha nke na-asacha, polishing, nhazi akpaka na nhazi site na ogo na ogo dị iche iche. Ọtụtụ teknụzụ eji eme ihe bụ ihe ọhụụ ma ọ nweghị analogues na usoro nke mmejuputa na Russia, nke ga-eweta ụdị nke akwụkwọ nri ọhụrụ na ọkwa ọkwa ọhụrụ.
Mmepụta ahụ na-agbaso ihe ndị kachasị sie ike n'ihe gbasara ịdị ọcha, ọrịa na nchekwa gburugburu ebe obibi. Companylọ ọrụ a na-etinye ego karịrị 330 nde rubles na-ewu nke ukwuu oru oma ọgwụgwọ ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ a ga-enye ndị ọrụ 907 ọrụ.
Tags: "Miratorg"nhazi nke inine na potetoMpaghara Tula
Owuwe ihe ubi gwụchara na Tajikistan
Anyị na-akpọ gị òkù ịtụle nsogbu nke ịkọ na ịchekwa eyịm! Otu ohuru ohuru na Telegram
Na mpaghara Tula, ihe ubi nduku karịrị 560 puku tọn
A ga-ebido ịkọ ihe ọkụkụ maka ịkọ poteto miri emi na mpaghara Tula
McCain na-etinye ihe ruru ijeri iri na abụọ. na mmepụta nke French fries na mpaghara Tula
Nduku nduku na mpaghara Kostroma belata site na 2,9%